1. Ny fefy dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny firaka aluminium mahery vaika indray mandeha.Ny ivelany dia nofafazana plastika tamin'ny alàlan'ny fanerena avo lenta taorian'ny fipoahana tifitra tamin'ny hafainganam-pandeha avo.Misy tombony vitsivitsy amin'ny fefy: rafitra mafy, fitaovana avo lenta, hery lehibe, fiasa tsara amin'ny fipoahana.Manana adhesion matanjaka amin'ny vovoka plastika izy io ary ny fampisehoana anticorrosive lehibe.Ny ivelany dia madio sy tsara tarehy;
2. Fanariana miforona, rafitra mirindra, endrika tsara tarehy;
3. Mampiasa jiro LED famirapiratana avo, miaraka amin'ny fanjifana ambany, fiainana maharitra (100,000 ora), toetra mianweihu;
4. Automatic optic fanaraha-maso switch dia afaka mitodika rehefa amin'ny alina na be zavona toe-javatra, dia maty amin'ny andro;
5. Izy io dia manova ny jiro ho azy, ny fahadisoana amin'ny fisafoana sy ny fanairana ho azy, rehefa miasa ny jiro fahenina, ny rafitra onjam-pitaterana dia hiondrika ary handefa famantarana fanairana feo&optic mba hanokafana takamoa vaovao;
6. Wiring amin'ny vy fantsona ny tariby.
7. Afaka mifanandrify amin'ny masoandro tontonana ho an'ny avo-fampisehoana masoandro tontonana, hanazava ny fiovam-po ho herinaratra ary tsy latsaky ny amin'ny famirapiratry ny 10lx toe-javatra rehetra dia afaka ara-dalàna fiovam-po, na dia YinYuTian dia mety ihany koa ny fiovam-po ara-dalàna sy voatahiry, Ity fametrahana takelaka ity dia tokony hojerena rehefa misy zavatra. tsy misy sunscreen, ho amin'ny tara-masoandro ambonin'ny fametrahana, ary tokony ho raikitra sy azo antoka;Boaty fanaraha-maso misy bateria fitahirizana angovo, avo lenta tsy misy fitadidiana voafaritra ho an'ny 12V / 0.7 Ah, ary misy rafitra fanaraha-maso famandrihana, ataovy ny jiron'ny sakana amin'ny fiovan'ny hazavana antoandro ho an'ny herin'aratra aorian'ny jiro mivoaka sy ny jiro mirehitra hatramin'ny 15 ora ambony. , mahafa-po tanteraka ny toerana isan-karazany mampiasa fepetra, Mariho telo proofing fanaraha-maso boaty rehefa fametrahana, azafady ambaratonga napetraka;
1. Mifanaraka amin'ny famaritana ny dikan'ny fitsipika sy ny fitsipika mba hifidy tsirairay, ary ao amin'ny modely fepetra arahana taorian'ny fitomboan'ny fipoahana-porofo marika.Ny fanehoan-kevitra mivaingana dia: "modely vokatra - kaody famaritana + marika tsy misy fipoahana + habetsahan'ny baiko".Toy ny ilaina ny vovoka fipoahana-porofo fiaramanidina tselatra fanakanana jiro, ny isan'ny 20 andian-baiko, ny vokatra modely fepetra arahana: "Modely: BHZD + famaritana: Ex tD A21 IP66 T80 ℃.